Isan-karazany mimari-droa Options – FX-Consultante
Mino izany na tsy misy kokoa ho atolotra amin'ny mimari-droa safidy fotsiny ny nentim-paharazana mimari-droa nomerika safidy fa maro ny mpivarotra mampiasa ny hahazo tombony. Ny fahatakarana ny samy hafa karazana safidy azo mimari-droa varotra afaka manome na mpanao voalohany mpivarotra amin'ny fananana bebe kokoa fa afaka mampiasa mba hampitombo ny varotra tetikady. Ny karazana safidy mimari-droa dia afaka manampy anao hanana paikady miorina eny amin'ny tsena amin'izao fotoana izao toe-javatra sy hampiasa fironana an-tsena noho ny tombom-barotra. Ireto ny sasany amin'ireo no tena karazana safidy mimari-droa fa afaka hanomboka varotra.
1. Hafanàm-po an safidy
Ireo no sasany amin'ireo tena fahita safidy mimari-droa fa afaka mieritreritra ny. Ireo safidy ireo matetika nomerika varotra amin'ny alalan'ny aterineto sehatra varotra sy hamela ny mpivarotra mba mifidy na miakatra, na midina ny safidy miorina eny araka ny tombantombana ny amin'ny fomba iray pananana dia hifindra amin'ny tsena. Ny safidy ny fifanarahana no toerana ny mpivarotra toy ny hoe mahatsapa ny pananana, dia hiafara amin 'ny fahataperan'ny mahasoa daty oharina amin'ny vidin'ny fidirana ny fifanarahana. A midina safidy na mametraka safidy dia safidy ampiasaina amin'ny dizitaly, rehefa mino fa misy mpivarotra iray pananana ho latsaka ambany ny fidirana-anivon'ny vidin'ny amin'ny fahataperan'ny ny safidy fifanarahana. Ny fampiasana ireo karazana safidy nomerika mety ho tena haingana sy mora indrindra ho an'ny ao anatin'ny fotoana fohy po. Hafanàm-po an safidy ihany koa ataovy mora ny manaraka maro po indray amin'ny alalan'ny kaonty portfolio-pejy.
2. Touch safidy
Io karazana safidy mimari-droa dia hafa kely kokoa noho ny nentim-paharazana hevitra mimari-droa safidy. Amin'ny Tai Chi safidy ny mpivarotra ny mpivarotra dia afaka manatanteraka roa mikasika, Ary aza manendry izay tsy mikasika fifanarahana. Indrindra mikasika fifanarahana faminaniana mahakasika ny tsena ihany koa. Ny safidy mikasika mieritreritra fa tena ilaina ny iray pananana dia hahatratra ny efa voafaritra mialoha profitability sisiny alohan'ny daty ny safidy dia tonga. Tsy misy safidy mikasika mihevitra fa ny efa voafaritra mialoha profitability sisiny dia tsy ho tonga. Double voakasiky mitranga rehefa voafaritra payout fotoana dia tafiditra amin'ny safidy fifanarahana niafara tamin'ny roa mety ho profitability. Rehefa manomboka mahazo mpivarotra tena tsara amin'ny fanombantombanana ary mahatsapa ho toy ny pananana mety hahatratra ny predefined sehatra ho ela mikasika safidy mety ho tena mahasoa ampy mimari-droa safidy.
Ireo dia roa monja ny tena karazana safidy mimari-droa izay mety ho azon'ny mpampiasa vola. Amin'ny vitsivitsy misy karazana hafa, mimari-droa dia afaka manolotra safidy ho faran'izay be karama tsena ho an'ny mpampiasa vola za-draharaha.
Next Post:User mpitari-dalana ho an'ny beginners in forex varotra